IHuawei isungula ityala elivumela i-P30 ukuba ihlawulise ngaphandle kweengcingo | I-Androidsis
IHuawei isungula ityala elivumela ukuba i-P30 ihlawuliswe ngaphandle kwentambo
Omnye umahluko ophambili phakathi kwe- IHuawei P30 kunye neP30 Pro yinkxaso yokutshaja ngaphandle kwamacingo okwenziweyo kule yokugqibela. Ewe, kulusizi ngokwenene ukuba uHuawei uthathe isigqibo sokungafaki ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwifowuni ethengisa ngaphezulu kwe-euro ezingama-700, kodwa oko akuthethi ukuba ayinakuhlawulisa ifowuni ngaphandle kwentambo.
Nangona kungekho coil eyakhelwe-ngaphakathi engenazingcingo kwisiphelo esitsha esiphakamileyo, usenokubiza i-Huawei P30 ngetshaja engenazingcingo enkosi Ityala lokutshaja elisemthethweni elenzelwe ifowuni.
Ityala likhutshiwe yile nkampani inye kwaye ayikuvumeli kuphela ukuba ubize ifowuni ngaphandle kwentambo, kodwa ikwanika ukhuseleko olungqongqo ngokwaneleyo kwaye inento engatyibilikiyo yokubonelela ngokubambelela ngokuqinileyo xa uyibambile. Uyilo luhle ngokwenene. (Jonga iHuawei P30 Lite entsha apha!)
Ityala leHuawei P30 lokutshaja ngaphandle kwamacingo linjalo Ixhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo okungu-10W (kusetyenziswa itshaja engenazingcingo yeHuawei), ethe chu kune-15W yokutshaja ngaphandle kwamacingo kwi-P30 Pro.Ikwanayo nesiqinisekiso sokhuselo lweTÜV Rheinland kunye nesiqinisekiso seQi.
Ityala linento eyakhiweyo yemagneti eyakhiweyo evumela ukuba iqhotyoshelwe ngokulula kumnini wefowuni emotweni yakho. Iyafumaneka ngemibala emibini: iorenji kunye neeturkey / eluhlaza. Akukho lwazi ngamaxabiso kunye nokufumaneka okwangoku.
Zininzi ezinye izinto ezifumanekayo kwiHuawei P30 kunye neHuawei P30 Pro.Ikho icala elicacileyo, ityala le-silicone, ityala le-PU, ityala lokujonga, ityala lesipaji kunye necala le-snorkel elikhethekileyo kwimodeli. njengoko lo mahluko ungena manzi. Umvelisi unoxanduva lokumilisela izinto ezahlukeneyo ezikhoyo kule modeli kunye nakwinguqulelo yePro ngokunjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IHuawei isungula ityala elivumela ukuba i-P30 ihlawuliswe ngaphandle kwentambo